Nezvedu - Hebei Monteono Machinery Technology Co., ltd.
Tine makore anopfuura gumi eruzivo mune hydraulic sando
Hebei Monteono michina tekinoroji Co., Ltd.Iri mu ROOM 1705, BLOCK B, JINYE BUILDING, NO. 282 ZHUHE ROAD HANSHAN DISTRICT, HANDAN CITY, HEBEI, Tiri boka rekambani, kunyanya riri kuita hydraulic sando uye inotsigira zvigadzirwa. Tine makore gumi ekuziva ruzivo. Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira hydraulic nyundo, chisel, musana musoro, pamberi musoro, pisitoni, gwenzi, tsvimbo pini, kii pini, chisel, bhachi, kumusoro uye kwakadzika humburumbira block, chisimbiso mafuta, nezvimwewo.
Kambani yedu ine sando kubva kudiki mhando kune hombe mhando, ine hupfumi akateedzana, akazara mamodheru, sando yakakodzera kuvaka chivakwa, mugwagwa wakaputsika, kucherwa, dombo rakaputswa uye imwe nzvimbo yekuvaka,
Isu tinotora chikamu mhando dzese dzehunyanzvi kutaurirana uye kushandira pamwe, Zvichakadaro, isu takavaka yakanaka mushandirapamwe mufananidzo uye zano rinova rekuziva kukwezva kwehunyanzvi uye inopembererwa nevazhinji vezvenhau, webhu, Isu tinogara tichitevedzera kune bhizinesi pfungwa yehunhu hwakanaka, mukurumbira wakakwirira, kukurudzira rudzi rwenyika.
Mukuvaka kweprojekti, zvakanakira kukoromora kongiri uye mashandiro emugodhi zviri pachena. Iyo kambani inogara ichiisa mhando yechigadzirwa sehupenyu hwebhizinesi, inonamatira kune "yakatendeka, pragmatic, budiriro" bhizinesi uzivi, kuramba ichikoshesa kukosha kwekutsvaga zvinangwa zvevatengi, kugadzira kukurudzira kwekuvaka, kuwedzera musika nehunhu uye basa, kukudziridza chiratidzo, kuwana kubatsirana pamwe nekukunda-kuhwina nevatengi.
Isu tinogadzira akasiyana chisel, asi zvakare maererano nevatengi vanodhirowa ekugadzira.
- Isu tinoedza nepatinogona napo kutsigira pakarepo mushure mekutengesa sevhisi yekumba-kune dzimwe nyika vatengi nyika yekutanga-kirasi zvigadzirwa